Ogaden News Agency (ONA) – Top Secret: safaarada gumeysiga Ethiopia ee London warqado laga helay
Gumeysiga Ethiopia ayaa wada qorsheyaal dhicisoobay balse horaa loo yiri dacawo meel ay macal ugu baratay ayay macaluul ugu baqtida. Gumeysiga Ethiopia ayaa u bartay boobka shacabka somaliyeed waxayna sanadihii ugu danbeeyay ay bilaabeen bililiqo iyaga oo ka aruursaday lacago Bulshada somaliweyn ee ku nool qurbaha. Wakaalada Wararka ONA waxay hadda ka hor soobandhigtay qorshaha gumeysigu ku boobayo bulshada iyaga oo usoo maray hindisaha biya xidheenka. Waxaan soo bandhignay in gumeysiga Ethiopia awoodin innuu sameeyo biyo xidheen balse yahay qorshe lagu jeedinayo shacabka Ethiopia islamarkaasna lacagaha la aruursado in lagu fulinayo siyaasada TPLF ee gumaadka ku dhisan… Maxaa eega Cusub.
Males Zenawi Foundation (MZF)
Gumeysiga Ethiopia ayaa dib u hindisay sidii ay lacago uga aruursan lahaayeen danyarta iyaga oo mudnaanta kowaad siinaya bulshada soomaliyeed ee ku nool wadamada ree galbeedka iyo ganacsatada soomaliyeed meel kasta ha joogaane. Gumeysigu waxa uu dhowaan soosaaray qorshe uu ku liidayo dadka somaliyeed islamarkaasna uu baad kaga qaadanayo. Dadka baada laga qaatay ayaa u badan xawaaladlayda somaliyeed iyo somalida ku adeegta qabiilka ee gaashanbuurta ka raadsanaysa gumeysiga Ethiopia si ay u dulmiyaan qabiilo kale oo somaliyeed. Gumeysiga oo ka faa ideysanaya tafaraaruqa somalida heysta waxa uu soo toshay kiish cusub oo uu rabo innuu ku aruursado baad kiishkaas oo siyaasado badan ka danbeeyaan waxaa loogu magacdaray Males Zenawi Foundation.
Safaaradaha Ethiopia ee ku yaala wadamada ree galbeedka ayaa lasoo gaadhsiiyay nidaamkan soomalida lagu baadhanayo. Safaaradaha gumeysigu waxay soo saareen warqado loo dirayo somalida ku nool qurbaha iyaga oo si qarsoon hanjabaado iyo balanqaadyo isla socda u fidinaya islamar ahaantaasna ku amraya inay bixiyaan dhaqaale ay ugu tabarucayaan Males Zenawi Foundation.
Dadka somaliyeed ayaa lagu qasbaya inay aqoonsadaan males zenawi oo isagu xasuuq badan ka geystay dhulka Ogadeniya iyo Somalia.
Hadaba siraha cusub ee soo baxaya iyo warqadaha aan ka helnay safaarada gumeysiga Ethiopia ee magaalada London ayaa ka hadlaya sida loola dhaqmi doono bulshada somaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan magaalada London iyo shefield dadka ku nool.
Waxaa sidoo kale qorshahan loo qeybiyay dadka somaliyeed qabiilo iyo beel beel iyada oo beel kasta oo somaliyeed lagula xisaabtamayo waxa ay ku darsan doonaan males Zenawi foundation. qorshahan laga fulinayo wadamada ree galbeedka somalida ku nool. waxa uu si toos ah uga bilaaban doona magaalada London iyada oo lagu wado sida ay qorsheysteen in kulan la qabto maalinimada salaasada 30 April 2013.
Ambasadarka u fadhiya gumeysiga ethiopia magaalada London ayaa codsaday si loo helo somali badan in shirkan lagu soo casuumo Cabdi UBO oo isagu waayahan danbe noqday ninka ay tigreegu ku shaqeystaan.
Sidoo kale warqadahan ayaa cadeynaya in ambasadarka gumeysigu oo lagu magacaabo Berhanu Kebede innuu si toos ah isagu u qorayo warqadaha howshana ugu xilsaaranyahay. Waxaa wajigi hore ay daawacdeen kaarar si qarsoodi ah loogu qeybinayo dadka.
Dad kamid ah shaqaalaha safaarada ayaa sheegay in arrintan aysan socon doonin maadama somalidi ay oggaatay dhalanteedkii loo jilayay balse wali waxaan rajeynayna in badan wali inay ku dhici doonana dabinadan loo dhigayo somalida.
Wakaalada wararka Ogadeniya ONA ayaa soo bandhigi doonta warqadahan sirta ah waqtiga ku haboon.